I-Light-duty Conveyor Belt, Indwangu Yenjoloba, Ulwelwesi Olungabonakali - UCayce May
Ukucubungula izinsimbi. Abasebenzi abanolwazi kakhulu futhi abahlomile
ngobuqotho nokwethembana kuheha amakhasimende emhlabeni wonke
I-Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd itholakala endaweni evundile yaseYangtze River Delta isikhungo sezomnotho, emuva emfuleni iYangtze, eTaihu. EMpumalanga kuya esikhungweni sezomnotho saseChina-eShanghai amakhilomitha ayi-150, entshonalanga ukusuka enhlokodolobha yasendulo-iNanjing amakhilomitha ayi-150, eningizimu kuya eWuxi Sunan International Airport amakhilomitha angama-50. I-Jinghu ne-yanjiang imigwaqo emikhulu emibili ihlangana endaweni yase-jiangyin, ibhuloho lomgwaqo i-jiangyin Yangtze River lixhumana nenyakatho naseningizimu yomfula i-Yangtze, liyindawo ebalulekile yokuhamba eMfuleni i-Yangtze ezansi nomfula. IWuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd itholakala emaphethelweni asempumalanga epaki lezimboni.
Ngemuva kokuhlala embonini yabicah ...
Izindlela zokwelashwa esizeni se-conveyor kube ...